Gbanwe aha mbu | Law & More BV
blog » Inggbanwe aha mbu
IWU IMIKỌ- & MIGRATION
NDER NA-EKWU NA AKQUKỌ
IKPUTA FILANYERE FINTARA & SANTA
PHARMA & NDEN NA-EKWU
EGO NA-EGO NTI EGO NA-EGO EGO
ANY PH FILOSOPOPY
Inggbanwe aha mbu
Na iwu, ndị nne na nna nweere onwe ha ịhọrọ ụmụ ha otu ma ọ bụ karịa. Agbanyeghị, n'ikpeazụ nwere ike ị gaghị enwe afọ ojuju na aha mbụ ị họọrọ. You chọrọ ịgbanwe aha mbụ gị ma ọ bụ nke nwa gị? I kwesịrị ilekwasị anya n'ọtụtụ ihe dị mkpa. E kwuwerị, ịgbanwe aha mbụ abụghị naanị "enwere ike".
Nke mbu, ichoro ezigbo ihe mere igbanwe aha mbu, dika:
Nkuchi ma obu omumu. N’ihi nke a, may nwere ike ịdị njikere maka mmalite nke ịchọrọ ịdọpụ onwe gị na oge gara aga ma ọ bụ mgbe mmemme nke njikọta sitere na mba ebe ị gara aga nwee aha mbụ.
Ofgbanwe okike. Na usoro, ihe kpatara nke a na-ekwu maka onwe ya. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ihe pụrụ iche n'echiche na aha mbụ gị n'ihi nke a anaghị ekwekọ na mmadụ gị ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị gị chọrọ mgbanwe.
I nwekwara ike chọọ ịhapụ onwe gị ka okwukwe gị wee gbanwee aha mbụ okpukperechi gị. Ọzọ, ọ ga-ekwe omume na site na iji aha mbụ nke okpukpe ịchọrọ ime ka njikọ ya na okpukpe gị sie ike.
Iji ike emegbu mmadụ ma ọ bụ ịkpa ókè. N’ikpeazụ, ọ ga - ekwe omume na aha mbụ gị ma ọ bụ nke nwa gị, n’ihi mkpoputa ya, na-akpata mkpakọrịta ọjọọ ma ọ bụ ihe na-adịghị ahụkebe ọ na-eduga n'ahịrị na-efe efe.
N'okwu ndị a kpọtụrụ aha, aha mbụ dị iche ga-eweta ngwọta. Na mgbakwunye, aha mbụ agaghị adị mma ma nwekwaa okwu iyi ma ọ bụ bụrụ otu aha nna ochie dị, ọ gwụla ma nke a bụkwa aha mbụ.
Have nwere ezigbo ihe kpatara ya, ịchọrọ ịgbanwe aha mbụ gị ma ọ bụ nke nwa gị? Mgbe ahụ ịchọrọ onye ọka iwu. Ọka ikpe ga-ezigara ụlọ ikpe akwụkwọ maka gị ịrịọ maka aha mbụ dị iche. A makwaara leta dị otú ahụ dị ka ngwa. Iji mezuo nke a, ị ga-enyerịrị onye ọka iwu gị akwụkwọ dị mkpa, dị ka otu akwụkwọ ikike ngafe, ezigbo akwụkwọ nke ọmụmụ nwa na mwepụta BRP mbụ.
Usoro n'ụlọ ikpe na-abụkarị edee ede ma ịkwesighi ịpụta n'ụlọ ikpe. Agbanyeghị, enwere ike ịnụ ntị ma ọ bụrụ na, mgbe ọ gụchara akwụkwọ anamachọihe ahụ, onye ọka iwu chọrọ ozi ndị ọzọ iji kpebie, ndị nwere mmasị, dịka ọmụmaatụ otu n'ime nne na nna ahụ, ekwenyeghị na arịrịọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ụlọ ikpe hụrụ ihe ọzọ kpatara nke a.
Lọ ikpe na-ebupukarịrị mkpebi ya na ederede. Oge dị n'etiti itinye akwụkwọ maka ikpe a bụ ihe dị ihe dị ka ọnwa 1-2. Ọ bụrụ na ụlọ ikpe enyere gị arịrịọ, ụlọ ikpe ga-enyefe aha ọhụrụ gị n'obodo a ga-edebanye aha gị na nwa gị. Mgbe emechara mkpebi ụlọ ikpe mara mma, ndị ime obodo na-enwekarị izu asatọ iji gbanwee aha mbụ na nchekwa data nke ndị obodo ya (GBA), tupu ịnwee akwụkwọ maka njirimara ọhụrụ ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala nwere aha ọhụrụ.
Thelọ ikpe ahụ nwekwara ike iru mkpebi dị iche ma juo arịrịọ gị ma ọ bụrụ na ụlọ ikpe achọpụta na enweghị isi ihe kpatara iji gbanwee aha mbụ gị ma ọ bụ nke nwa gị. N'okwu ahụ, ịnwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka elu n'ime ọnwa atọ. Ọ bụrụ na ịkwenyeghị na mkpebi nke ụlọ ikpe mkpegharị, n'ime ọnwa atọ ị nwere ike ịrịọ thelọikpe Kasị Elu na cass ka ị kagbuo mkpebi nke ụlọ ikpe mkpegharị. Onye ọka iwu ga-enyere gị aka ma nkuchite okwu gị na oge a.
You chọrọ ịgbanwe aha mbụ gị ma ọ bụ nke nwa gị? Biko kpọtụrụ Law & More. Na Law & More anyị ghọtara na mgbanwe nwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya na iche kwa otu onye. Ọ bụ ya mere anyị ji eji ụzọ mmadụ si eme ihe. Ndị ọka iwu anyị enweghị ike inye gị ndụmọdụ, kamakwa nyere gị aka na ngwa ịgbanwe aha mbụ ma ọ bụ nyere aka n'oge usoro ikpe.
Previous Post Ismhapụ onye isi ụlọ ọrụ
Next Post Iji ike emegbu mmadụ n'ọrụ
E. [Email na-echebe]